Tayada sirta ah ee AASraw
Wixii tayada AASraw, jacaylkayaga "alaabooyinka genius ayaa loo arki karaa" macnaheedu waa. Isticmaalidda steroids khibrad leh ama milkiilayaasha shaybaarka leh, laga soo bilaabo muuqaalka iyo urta iyo astaamaha muuqaalka jirka, waxay u sheegi karaan alaabtu inay yihiin kuwa ugu xun ama kuwa xun. Laakiin si ay u caawiyaan qaar ka mid ah gacmaha cusub, Dhammaan alaabta ceeriin ee AASraw waxaa loo damaanad qaaday daahfureer la'aanta ah oo aan ka yarayn 98%, inta badan alaabtu waxay la socotaa 99%. Waxaa jira warbixinnada imtixaanka HPLC iyo COA oo ah taageerada aasaasiga ah ee ballanqaadkeena. Iyo, waxaan ku dhiirrigelineynaa macaamiisha la soo iibsaday si ay u tijaabiyaan budada cayriin ee shaybaarada deegaanka iyo waxaan bixin karnaa kharashka la xiriira.